दिल्ली भर्सनको असफलता पछाडि ‘अंग्रेजी भर्सनमा’ मधेशीको आन्दोलन ? – YesKathmandu.com
मधेश आन्दोलनको दिल्ली भर्सन अन्त्य भएर अग्रेजी भर्सन सुरु भएको हो त ? आइतवार र सोमवार सिंहदरवारलाई धक्का दिने उदेश्यले २९ दलको गठबन्धनमा वेलायतका नागरिक समेत सामेल भेटिएसँगै यो प्रश्न सतहमा आएको छ । सोमवार प्रहरीले आन्दोलनमा सहभागी बेलायती नागरिक मार्टिन बेन्जमिन पक्राउ परेसँगै यो प्रश्न पेचिलो बन्न पुगेको हो । गृह मन्त्रालयले आन्दोलनमा बेलायतको सहयोग रहेको आंशका गरेको छ ।
यता,झण्डै एक लाख मान्छे उर्ताेने र सिंहदरवारलाई धक्का दिने आन्दोलनमै मधेशीहरुले धक्का खाएका छन । मधेशका गठबन्धनका बीचमा नै तिव्र मतभेद देखिएको छ । एक लाख भन्दा वढि कार्यकर्ता उतारेर सिंहदरबारलाई धक्का दिने बताइए पनि गठबन्धन बीचको तिव्र विवादका कारण तीन हजारभन्दा माथिको संख्यामा कार्यकर्ता उर्तान सकेनन् । आइतवार र सोमबार राजेन्द्र महत्तोले सम्हालेको अनामनगर मोर्चामा तीन सयको हाराहारीमा र उपेन्द्र यादवले सम्हालेको मोर्चामा दुई हजारका हाराहारीमा कार्यकर्ता परिचालित भएसँगै गठबन्धनका शिर्षस्थ नेताहरु हिस्स बूढी खिस्स दाँतको अवस्थामा पुगेका छन । आइतवार र सोमवार आन्दोलनकारीको संख्या २ हजारको हाराहारीमा रहे पनि प्रहरीको संख्या ३ हजार भन्दा वढि परिचालित भएका थिए ।
आन्दोलनको अघिल्लो दिन मात्र हृदयश त्रिपाठी मधेश तिर झर्नु र महन्थ ठाकुर उपचारको बाहना देखाई दिल्लीतिरै रुमल्निुको पछाडि गठबन्धन बीचको असन्तृष्टिले काम गरेको तह होइन ? हृदयश आन्दोलनको मुखमा तराइ झरेपछि गठबन्धनबीच गभ्भिर मतभेद रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार,आदिसबासी जनजाती उर्ताेने वा नउतार्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनका शिर्षस्थ नेताहरु बीच विवाद भएको थियो । राजेन्द्र महत्तोहरुको समूह यो आन्दोलनमा मधेशी मोर्चाको बाहेक अरुको उपस्थित नहोस भन्ने चाहन्थे तर उपेन्द्रको स्वभाव अलि बेग्लै थियो । यस्तै यस्तै विवादका कारण तीन हजार भन्दा वढिको संख्यामा आन्दोलकारी उपस्थित नभएको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार भारतले जनजातीहरुलाई रुचाएको छैन । भारत जनजाती बिहिन आन्दोलन चाहन्छ । महतोलाई दिल्लीले पटक पटक आन्दोलनमा जनजाती बाहेकका मधेशी मात्र उर्तान निर्देशन दिएको थियो । उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महत्तोहरु बीच विवाद छ । उपेन्द्र यादवहरु प्रति दिल्ली रुष्ट छ ।
उता,महन्थ विरामीको बाहनामा दिल्ली तिर हान्निएका छन भने हृदयेश त्रिपाठी आन्दोलनको अघिल्लो दिन मधेश तिर हानिएका हुन । हृदयश महाअधिवेशनको तयारीको लागि नवलरासी तिर हानिएका छन । महन्थ स्वास्थोपचारका लागि दिल्लीमा पुगेका छन । तमलोपाका तर्फबाट जितेन्द्र सोनाल महामन्त्रीले आन्दोलनको मोर्चा सम्हालेका हुन । यही कारण पनि उनीहरु बीच तिव्र विवाद छ । उता,महन्थ र हृदयशहरुको अनुहार आन्दोलनमा नदेखिए पनि सरकारमा सामेल विजय गच्छदारका विजय गच्छदारका पिए कन्हैया समेत यही आन्दोलनमा हिडिरहेको रमाइलो दृश्य देखा पर्यो ।